[APK] Nhọrọ kachasị mma na Playlọ Ahịa Google Play | Gam akporosis
[APK] Nhọrọ kachasị mma na Playlọ Ahịa Google Play
N’isiokwu na-esonụ achọrọ m iweta a ụlọ ahịa ọzọ na Playlọ Ahịa Google ha malitere ulo oru Android ha. Ngwa na ngosipụta dị egwu yana ị chọghị ịbụ onye ọrụ mgbọrọgwụ iji wụnye ma jiri ya na ọnụahịa gam akporo gị.
Kedu ka o si bụrụ ihe ezi uche, ịbụ ngwa Storelọ ahịa ma ọ bụ Applọ ahịa ngwa gam akporo, dịka ọtụtụ ngwa ndị ọzọ nke ụdị ahụ dị ka Ngwa Amazon, Apptoide na ụlọ ahịa ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha ebe a na ihe karịrị otu oge, enweghị ike inweta ihe ndị a site na Playlọ Ahịa Google Play, yabụ na anyị ga- budata na mpụga na Google Market ma rụọ ọrụ ntuziaka site na ime nhọrọ n'ime ntọala nke gam akporo anyị na ngalaba Nchebe a na-akpọ isi mmalite amaghi ama. N'okpuru anyị na-akọwa ihe niile banyere ọzọ ụlọ ahịa na- Storelọ ahịa eji egwu egwu n'efu anyị na-ekwu okwu banyere ya, yana ịrụ nrụnye dị mfe nke enweghị mgbọrọgwụ.
Uptodown nke kacha mma ọzọ na Storelọ Ahịa Play nke oge ugbu a yana ngwa ya raara onwe ya nye
Mgbe m gwara gị aha nke Uptodown, n'ezie ị ghọtara na ị na mgbe ebudatara ngwa na ngwa format ozugbo na ukara website na otu aha Uptodown. nke ọma, ugbu a nwere a raara onwe ya nye ngwa maka gam akporo, ngwa nke emeputara ugbu a ma kpọbata anyị ka anyị nwaa ma gwa eziokwu na ọ kpatara anyị ezigbo mmetụta.
Ha esiwo na ngwa nke dubara anyi na webusaiti ha, nke bu WebApp di mfe, rue ihe di ugbu a ngwa gam akporo di ocha ma di mfe nke nhazi ya di egwu nwere bọtịnụ na-ese n'elu mmiri nke dabara nke ọma ma nye ya mmetụ nke kachasị dị ugbu a ma baa uru. Ihe ndi a nile jiri ihe eji eme nma na nke ugbua jiri mmiri ederede doro anya nke anyi gosiputara na ihe omuma ma obu nkowa nke ngwa na egwuregwu ndi anyi na acho.
Ihe kachasị mkpa nke Uptodown for Android bụ na n'ime ya anyị ga-enwe ike ịchọta ngwa ndị ahụ adịghị na Playlọ Ahịa Google n'ihi nsogbu nke iwu nchekwa siri ike nke Mountain View ma ọ bụ n'ihi na ha na-emebi nwebiisinka ma ọ bụ n'ihi na amachibidoro ha dabere na mpaghara mpaghara.
Na vidiyo nke m hapụrụ gị n'aka nri nke mbido post m na-akọwa n'ụzọ zuru ezu etu ngwa ahụ si dị, ngwa ndị anyị nwere ike ibudata na ya na ụdị ọkwa anyị nwere ike ịgbalite ma ọ bụ kwụsị ọrụ na ntinye ngwa ahụ n'onwe ya. Ma ọ bụ site na Uptodown maka gam akporo, ewezuga inwe ike iji ya dị ka ọzọ na Playlọ Ahịa GoogleAnyị ga-enwe ike iji ya dị ka isi ngwa na ọbụna imelite anyị arụnyere ngwa site na nke a na-akpali akpali ọzọ ụlọ ahịa na Google Play ma ọ bụ Google Play Store.
A ụlọ ahịa na ọbụna downloads ngwa n'ụzọ anụ ahụ na-echekwa ha na anyị gam akporo ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta ha ọsịsọ na ngwangwa na onye ọ bụla anyị chọrọ ma ọ bụ wụnye ya na ọsọ ọsọ mgbe anyị wepụrụ ha. A na-echekwa ngwa ndị a na folda nke ebe nchekwa dị n'ime gam akporo anyị nke nwere otu aha ahụ dị ka ngwa ahụ, ya bụ, Uptodown.
para budata ngwa ahụ ị ga-agabiga otu uzo a ma ọ bụ site na Uptodown ukara website.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Nhọrọ kachasị mma na Playlọ Ahịa Google Play
Spp dikwa nma, daalụ
Alexander sanchez dijo
Ahịa AC, anaghị akwụ ụgwọ
Zaghachi Alejandro Sanchez
Getapk dikwa mma
Kwụ ụgwọ na ngwa gam akporo ga-adị elu karịa iOS maka oge mbụ na 2017 mana ...
Samsung Gear 360, na mkpebi 4K na vidiyo vidiyo 360